Ngaba bengafumani into awayeyizondelele kwezinye kumaphepha kwisiza? Impendulo mhlawumbi apha, kodwa, ukuba akunjalo, ungasoloko usithumelele umbuzo ngokukhawuleza. sisoloko sele ukulungele ukunceda nangayiphi na indlela ngayo.
Nayiphi Umbuzo washiya ayiphendulwanga? kakuhle apha asinamzi ezinye mbuzo eqhelekileyo kodwa ukuba akathanga Yanela nina nindisize kuthi umbuzo yakho kwaye siza kuzama ukuphendula ngexesha kakhulu.
I encinane kakhulu malunga China uyazi. Ngaba Mandarin Morning ukundinceda?
Mandarin Morning inika abasemzini ibhulorho ezweni endimangazayo ingane of China.
Kuba abo eza China okwesihlandlo sokuqala, nokuba ishishini okanye ubumnandi, ubomi kunokuba zingaphezu ngaphandle kokwazi balapha okanye ekuqondeni ulwimi. izinto ezilula imihla ngemihla ezifana odola ukutya, ngokuthatha iteksi, kwaye ecela imiyalelo unokuba phukisa yaye maxa wambi engenakwenzeka.
inkqubo ngokunzulu MandarinMorning kaThixo ukuntywiliselwa ulwimi Mandarin unika abafundi isigama kunye nokuzithemba ukufumana yi kunye nokonwabela ubomi e China.
Yintoni eyenza Mandarin ngaphandle kukuba isikolo inika abafundi top-hlengiso lweenotshi izixhobo ulwimi Mandarin nje kuphela, kodwa ibanika Chinese 'iqabane' nomhlobo ukuncedisa kuyo nayiphi na uhlobo imeko.
Yintoni na isixeko Shanghai nje?
Shanghai sesona sixeko onamandla China kunye nenye kwezi zixeko ugesi ehlabathini lonke! Zininzi izinto ezivuyisayo ukuyenza kwaye kufuphi Shanghai - isixeko amawaka zokutyela, bars, kwiiklabhu, ezivenkileni, iisayithi imbali, yaye ngaphezulu. Sikhoyo kufuphi ezininzi izixeko abazizityebi ngokwenkcubeko China ezifana Suzhou kunye Hangzhou. Vumela Mandarin Morning ukwazisa ukuba isixeko elizayo. Cofa apha ukuba ufuna ukwazi kabanzi ngento eyenza Shanghai omkhulu kangaka.
Yintoni na inqanaba yam Chinese?
Ungavavanya inqanaba lakho Chinese ngokuthatha iimviwo intanethi okanye ecebe ukuba idinga atyelele zekhampasi ukudibana yincutshe. Cofa apha ukuze athathe online uvavanyo kwinqanaba Chinese. Isiphumo kovavanyo online uya kukunika kudidi ngakumbi ethile kwinqanaba yakho Mandarin.
njani ubhalisela MandarinMorning izifundo?
Nawe unako ukugqiba nje isicelo intanethi okanye umnxeba 021-52287809 kunye neengcali kuya kukunceda.
Ingaba iza kuthatha ixesha elingakanani ukuze ngam ukufunda Chinese?
Wonke umfundi ufunda ngesantya zakhe; kunjalo umfundi MandarinMorning avareji baya kufunda izakhono ezingundoqo zokunxibelelana (ukufunda, ukubhala, ukumamela, nencoko) iiyure 120 lwezifundo. Oku kuquka isigama amagama 1000 kunye namabinzana. Abafundi bangakwazi ukugqiba kwinqanaba eliphakathi emva kweeyure ezili-180. Oku kuquka isigama of 1500 kunye namabinzana. Emva kokuba kwinqanaba eliphakathi, abafundi bethutha kwiindawo ezahlukeneyo advanced IsiTshayina (Business, uKhenketho, Literature, njl) - kwinqanaba eliphezulu, abafundi beqhubela phambili ngesantya zabo.
Ngaba Mandarin Morning zinika indawo yokuhlala?
Ewe. Kukho iinketho izindlu ezininzi e Shanghai - yesintu Chinese-style eliphilayo zokuhlala ultra-mihla yasentshona-style. Amaxabiso uqobo zilala ngeenxa RMB 6500. Nceda uthumele i-email ku MandarinMorning kwi info@mandarinmorning.com kunye ukhetho lakho kunye umntu uya ngokukhawuleza kubuyela kuwe iinketho, kuquka namaxabiso.
into MandarinMorning ibekwe phi?
MandarinMorning isentliziyweni Shanghai, isixeko sezona ziquququ eTshayina. Zemfundo elise lula kufutshane zokuhamba, ezivenkileni, kunye zokutyela. Ukuze ufumane ulwazi oluthe vetshe bafike kwikhampasi MandarinMorning, cofa apha.
Bangaphi abafundi kwiklasi MandarinMorning nganye?
manani obukhulu beeklasi kuya kubakho ezinkulu kuno 8 (avareji 4 okanye 5). MandarinMorning iphumelela kuphela xa abafundi bafunde kwaye ukonwabele amava abo. Kunye kwiklasi ezincinci, injongo kukuba ukukwandisa ukunceda ukunciphisa nokuphazamiseka eklasini.
ndinako ukuthatha nini eklasini?
Abafundi kufuneka azimanye iklasi iqela ekhampasini ngexesha lezifundo zabucala ezicwangciselwe rhoqo izifundo okanye Ungahlela nangaliphi na ixesha. imibuzo Email ukuba info@mandarinmorning.com okanye umnxeba 021-52287809.
Ngaba utitshala undifundise ekhaya / ofisi?
Khosi ezifundiswa i ekhampasini MandarinMorning okanye umfundi ekhethwayo kwiindawo (ikhaya, ofisi, okanye ezinye) apha.